ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်း4YSS-1000 ဖုံးကိုဓားရှည် Starfighter DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်း4YSS-1000 ဖုံးကိုဓားရှည် Starfighter FSX & P3D
အရွယ် 12.6 ကို MB
downloads ရယူရန္ 12 278
Author: ဘရုစ် Fitzgerald, ရော့ Barendregt
Halo4ဟာ Halo စီးရီးအတွက်သတ္တမဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ YSS-1000 အထင်ကြီးစွမ်းရည်နှင့်အတူဂိမ်းထဲမှာဖွင့ ်. နေတဲ့အာကာသယာဉ်တိုက်လေယာဉ်ပါ! အရူးအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဒီစက်ကိုထိန်းချုပ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံစားပါ။ အဆိုပါမော်ဒယ်ဂရပ်ဖစ် "နောက်မှ-burners တွေက" အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ထုံးစံအသံနှင့်အတူထည့်သွင်းအရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ကြ၏, ဂိမ်းရန်အလွန်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ဇာတိ FSX/P3D
- max မှတစ်ခုတည်းဇာတ်စင်, မြေကြီး FSX/P3D အမြင့် (10 သန်းပေ)
- ထပ်တိုး Mach 4.6 / 2666 kts (နဲ့အတူ max ကိုမြန်နှုန်းFSX/P3D max ကို)
- ရော့ Barendegt ရဲ့ spacegauge v2.0 အပြည့်အဝ imbeded နှင့် configured
- VC ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Windows တွင်အာကာသအထွာ
- နူန်းကျော်ကျော်ဖတ်ထုံးစံ gauge fsx/p3d max ကိုအမြန်နှုန်းနှင့်အမြင့်
- VC နှင့် WSO ကို virtual cockpit
Battlestar Galactica TOS Two-Pack ကို FSX အရှိန်
ဘိုးအင်း 7072 Orion အသံထက်မြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး FSX
1701 သင်္ဘော USS Entreprises အခြား 2.0 FSX & P3D
မြောက်အမေရိက xB-70 ဘော့နာဆာ FSX & P3D